Xeradii Tababarka ee ay Kooxda Jwxo-shiil ku Lahayd Musawac oo la Xidhay – Rasaasa News
Oct 11, 2009 Eritrea, Jwxo-shiil, ONLF
Jwxo-shiill oo ay ka soo xidhantay fursadii ugu dambaysay fursadihii uu ku burburiyey halganka ay waday Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] iyo iyada oo la isweydiin karo kol hadii uu halgankii burburiyey ummadiina ayna arki karin halka uu ku noolaandoono, waxaan filin in uu malaga ku sugi doono guraga dawlada Ingiisku ay ku siisay qaxootinimada ee ku yaal London.
Dagaalkii dhexmaray xukuumada Eritrea iyo xukuumada Itobiya waxaa uu jaho khaldan u qaaday halgankii ay ku jirtay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo]. Xukuumada Eritrea waxay si lama filaan ah ugu yeedhay Dr. Dolal iyada oo ugu baaqday in ay siindoonto wax alaale wixii taageero aha oo ay u baahan yihiin, Jwxo oo hore u haysatay kaliya taageerada shacabkeda ayaa waxay dooratay in ay ka faa,iidaysato dalabka dawlada Eritrea.
Waxaa ugu horeyntiiba loo furay Jabhada ONLF xer tababar oo weyn kuna taal magaalda Musawac, waxaana la siiyey wax alaale wixii tababar iyo dhaqaale ahaa ee ay u baahnaayeen iyada oo lagu soo xereeyey xerada kumanaan kun oo Gabeele iyo Ogaden [ONLF] isugu jira. Waxaa kale oo cirka martay dacaayadii ay dawladii samayn lahayd, hal mar ayaa waxaa ONLF soo galay dadweyne xukun doon ah, oo aan lahayn niyad Jabhadeed.
Kolkiiba waxaa soo baxay khilaaf u dhaxeeya ururka masuuliyiintiisa oo ay asal u tahay fargalinta xukuumada Eritrea oo iyadu noqotay mida leh go,aanka ugu dambeeya ee ONLF, arintaas oo ka cadhaysiisay xubno ururka ahaa. Kolkii la codsaday in sharciga oo ururka la raaco waxaa xukuumada Eritrea dabada la galay Jwxo-shiil, oo isagu ku soo barbaaray madax adayg iyo xukuumad Tiktaatoriyada, wuxuuna helay arin waa hore niyadiisa ka baxday oo uu dib boodhka uga afuuftay.
Waxaana uu wax walba u sameeyey sidii uu u guran lahaa lacagaha haqab la,aanta ah ee ay bixiso xukuumada Eritrea, waxaa ururka ka kalatagay ciidamdii ay eritrea tababartay ee ay lacagaha ku bixin jirtay, waxayna galeen dhanka ka soo horjeeda waaa xukuumada Itobiya, ciidamadaas oo hada Kaalinka 5aad looga yaqaan New Police.
Hadaba, xukuumada Eritrea ayaa waxay xidhay bishan bilowgeedii xeradii tababarka iyo taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay kooxda Jwxo-shiil, warar hoose oo ka imanay Musawac ayaa sheegaya in loo sheegay dadkii wakiilka uga ahaa Jwxo-shiil in ay ka tagaan xerada oo xerada la xidhay. Dadkii joogay xerada ayaa waxay aadeen xerada qaxootiga ee ku taal iyaduna musawac, waxayna la soo xidhiidheen Jwxo-shiil, wuxuuna yidhi kama warhayo in ay arintaasi ay jirto iyo in kale, laakiin nin la aamin ma aha Jwxo-shiil.
Waraqada loo dhiibay wiilsha joogay xerada la xidhay ayaa waxaan isku dayeynaa in aan helo koobigeeda si,aanu idiinku soo gudbino, xiliga xerada la xidhay ayaa waxaa ka joogay kooxda Jwxo-shiil ee ku nool dalalka reer galbeedka Ina Maryama Agan, oo aan la ogayn waxa uu samayn doono iyo in loo ogolaan in uu ka soo baxo Eritrea.
Ugu dambayn cidii ay wax ehelkood ahi joogeen Eritrea waxaa lama huraana in ay ka warhayaan, waayo wax waliba waa ka suurtoobaan xukuumada Eritrea in ay ku samayso dadkaas joogay dalkooda, waxaana dhci karta in ay layso ama ay xidhxidho sidii ay hore ugu samaysay Jabhadaha dalka Sudan.